इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - सिलब्ानो गार्सिया, II।
सिल्बोनो गार्सिया द्वारा उपदेश, II।
सिलबोनो गार्सिया, II। ख्रीष्टका चर्चहरूका लागि सुसमाचारको रूपमा सेवा गर्दछ, र इन्टरनेट मन्त्रालयको संस्थापक छ। मई 1 मा, 1995 त्यो मसीह को चर्चहरु को लागि पहिलो इंटरनेट गेटवे को तैनाती मा दुनिया भर मा जाना चर्च-of-Christ.org. यहोवाले तिनलाई पाँचवटा मण्डली स्थापना गर्न प्रयोग गर्नुभयो, र उहाँले 1,527 आत्मालाई येशू ख्रीष्टको शरीरमा बप्तिस्मा दिनुभएको छ। केवल परमेश्वर मात्र हाम्रो अनलाइन बाइबल अध्ययनहरू र इन्टरनेट मन्त्रालयहरूमार्फतर्फत क्रिश्चियनमा आएको आत्माहरूको संख्या थाहा छ। भाइ गार्सिया इन्टरनेशनल इंजीलवादको क्षेत्रमा ईन्टरनेट इभान्जिस्टिस्ट र अग्रगामीको रुपमा चिनिन्छ। येशूका सुसमाचारको सुसमाचार फैलाउन इन्टरनेट प्रयोग गरेर सैकड़ों मण्डलीहरूलाई सहयोग पुर्याउनुहुने उहाँ सहायक हुनुहुन्छ।
भाइ गार्सिया एक उत्साहजनक मसीही हो जसले आफ्ना उपदेशहरू र प्रस्तुतिहरूमा गतिशील छ। विश्व ईश्वरत्ववादको उनको सकारात्मक दृष्टिकोण संक्रामक हो र तपाईं ख्रीष्टको यो सेवकले प्रोत्साहन पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले भाइ गार्सियालाई ईश्वर ख्रीष्टको शरीरमाथि जित्नुको उपहारको साथ आशिष् दिनुभएको छ। उनले ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गरे र चर्चहरूमा विश्व ईश्वरवादलाई प्रोत्साहन दिन प्रयास गरेका छन्। भाइ गार्सिया एक प्रचारकको रूपमा सेवा जारी छ जुन केवल चासो उहाँ हाम्रो प्रभु र उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको शरीरको निर्माण गर्न हो।
भगवानमाथि भरोसा राख्नुहोस्!
यदि तपाइँ माथि मिडिया हेर्न सक्नुहुन्न भने - यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्: MP3
प्रभुमा बलियो हुनुहोस्!